Diyaarad duqeeysay degmada Baardheere ee gobolka Gedo – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDiyaarad duqeeysay degmada Baardheere ee gobolka Gedo
Diyaarad duqeeysay degmada Baardheere ee gobolka Gedo
18/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Diyaaradaha dagaalka ee milateriga dalka Kenya ayaa gelinkii dambe ee shalay duqayn ka gaystay gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya.
Saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in duqaynta oo ka dhacday tuulada Gerileey ee hoos tagta degmada Baardheere uu bartilmaameedkeedu ahaa fariisimo ay ku sugnaayeen mileeshiyaad ka tirsan Al shabaab.
Duqaynta ayaa timid saacado kaddib markii isla deegaankaas dagaal xooggani ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahannada Al shabaab.
Faah faahin dheeri ah lagama hayo khasaaraha Al shabaab kasoo gaaray duqaynta, haseyeeshee qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in duqaynta waxyeello kasoo gaartay dad rayid ah.
Waa markii saddexaad muddo asbuuc gudihiis ah ee duqayn caynkan oo kale ahi ay ka dhacdo gobolka Gedo.
Saddex maalmood kahor ayey ahayd markii diyaarado loo malaynayo in ay kuwa Kenya yihiin ay duqayn ka geysteen duleedka degmada Garbahaarreey.
AKHRISO:- Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo magacaabay xilal cusub